ရေးသားသူ poemflower at Sunday, April 26, 2009
လင်းကြယ်ဖြူ April 26, 2009 at 5:31 AM
Anonymous April 26, 2009 at 9:57 AM
ဥလေးတွေ အကောင် ပေါက်တဲ့ အထိ သေချာစောင့်ကြည့် ဂရုစိုက်ရမယ်။ အကောင်ပေါက်ပြီးလဲ အရွယ်ရောက် ကြီးပြင်းတဲ့ အထိ သတိနဲ့ စောင့်ကြည့်ထိန်းချုပ်ဖို့ လိုအပ်သေးတာပါပဲ။ ဗဟုသုတ အတော်ရစေတဲ့ ပို့ကောင်းလေးပါ။ အားပေးနေလျက်။ ချမ်းမြေ့ပါစေ။
Dream April 26, 2009 at 12:37 PM
တကယ်ကောင်းတဲ့ ပညာပေးပို့စ်လေးပါပဲ တီတီကဗျာရေ.......
မှတ်သားစရာ ပညာပေးစကားပုံလေးက လိုက်နာစရာပါ........
စာရေးအရမ်းကောင်းတဲ့ ပညာပေး ဗဟုသုတတွေ အမြဲပေးတဲ့ တီတီကဗျာအတွက် အာဝါးးးးးးး အမြှောက်တစ်သိန်း... :)
kokomaung.uk April 26, 2009 at 3:28 PM
ပန်းကဗျာလဲ ခေါင်းမော့မပြလိုက်နဲ့ဦးနော်။ ဟဲ ဟဲ။ မှောက်ကျကုန်မှာ စိုးလို့။
အခုမှ comment ပေးလို.ရတယ် ဒီဘလော့ကို လာတိုင်း အသိတစ်ခုတော့ ကျန်တယ်ဆိုတာ ၀န်ခံတယ်ဗျို.
သီဟသစ် April 26, 2009 at 4:08 PM
ပန်းကဗျာ ၊ မေ 16 တို့ရေ..
ကိုရင်နော်ခင်လေးငယ် April 26, 2009 at 5:01 PM
ဥမပေါက်ခင် ကြက်ကလေးများကို မရေတွက်ပါနှင့် အင်း ဟုတ်ပါ့နော်.. ဘဝမှာ ဒါမျိုးလေးတွေ ဖြစ်တတ်တယ်.. မှတ်သားထားရမယ်..
အင်း... အဲဒါပေါ့ဗျ မုန့်ဆီကြော် ဘယ်ဆီနေမှန်း
မသိသေးဘူး နှုတ်ခမ်းနာနဲပ တည့်ပါ့မလားဆို
လင်းနေ April 27, 2009 at 7:37 AM
အတော်မှတ်သားစရာကောင်းတဲ့ စကားလေးပဲဗျာ မှတ်သားနာယူသွားပါ၏
Welcome April 27, 2009 at 10:45 AM
မျှော်မှန်းချက် ပျက်သွားတဲ့ နွားနို့သည်မလေး သနားစရာပါ။ သူလည်းပဲ ဒီအမှားကနေ သင်ခန်းစာ ကောင်းတစ်ခု ရနိုင်မယ် ထင်ပါတယ်။
Daywalker April 27, 2009 at 1:38 PM
အီစွတ်ရဲ့ပုံပြင်တွေကို အမြဲတမ်းသဘောကျတယ်။ တွေးစရာလေးတစ်ခု အမြဲတမ်းပါတတ်လို့ . . .
ဒါကြောင့်လည်း သူ အသတ်ခံရတာဖြစ်မယ်။
mgnge April 28, 2009 at 12:17 AM
အောင်မြေ April 28, 2009 at 8:49 AM
မှတ်သားစရာ ပုံပြင်ကောင်းလေးတွေပါ၊ မြန်မာမှုနဲ့လည်း ကိုက်ညီတယ်။
ညခင်း April 28, 2009 at 5:15 PM
ဥမပေါက်ခင် ကြက်ကလေးများကို မရေတွက်ပါနှင့် "
ဖိုးဂျယ် April 28, 2009 at 5:25 PM
ပညာပေး ပုံပြင်လေးပဲ ကောင်းပါတယ်။
သဘောကျမိတဲ့ ပုံပြင်လေး တစ်ပုဒ်ပါ ... တိုတိုလေးဆိုပေမယ့် ရည်ရွယ်ချက်လေးက ထိမိပါတယ်။ ကျေးဇူး ...
Phyo Maw May 2, 2009 at 9:07 PM
♥ Acacia ♥ May 6, 2009 at 3:18 PM
ပုံပြင်ထဲက ကောင်မလေးက တော်တော်စိတ်ကူးယဉ်တဲ့ ကောင်မလေးပါလားနော်